Olan’ny Elgeco Plus sy Fosa Juniors Fc Aoka hampitoviana lenta ireo ekipa rehetra, hoy Atoa Alfred
Coupe Arabe U20 2020 Tapitra ny dian’ny Barea
Nifarana omaly alahady 23 febroary tany amin’ny kianja Faisal Bin Fahad any Arabie Saoudite ny dian’ny Barea U20 miatrika ny fifaninanana “Coupe Arabe U 20 2020” eo amin’ny sehatry ny baolina kitra.
Orange Pro-League andro faha-13 Nomontsanin’ny Jet Mada 9-1 tao an-jaridainany ny Club M
Tanteraka tamin’ny an-tsakany sy an-davany avokoa ireo lalao rehetra tafiditra amin’ny andro faha-13 eo amin’ny fifaninanana baolina kitra “Orange Pro-League Malagasy”
Volley-ball - Championnat des Clubs de la Cavb Zône 7 Tompondaka lefitra ny STEF’AUTO sy GNVB
Nifarana tamin’ny sabotsy 22 febroary 2020 tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahanena Mahamasina ny fifaninanana Volley-ball 26e
Rugby Commission Section Tanà-ville Tsy tontosa ny famaranana sokajy D-2
Tsy tontosa ny lalao famaranana sokajy D-2 hoan’ny Commission STVR “Section Tanà-Ville Rugby” saika notanterahina tetsy amin’ny
Orange Pro-League Malagasy andro faha-13 Anio zoma dia efa hisy lalao hotanterahina
Hiditra amin’ny andro faha-13 sahady ny fifaninanana baolina kitra Orange Pro-League Malagasy amin’ity faran’ny herinandro hitsahana ity ka anio zoma 21 febroary 2020
26e Coupe Des Clubs De La CAVB Zône 7 Ekipa Malagasy roa no hiatrika ny ankatoky ny famaranana anio
Anio zoma 21 febroary 2020 no hanatanterahana an’ireo lalao ankatoky ny famaranana 4, sokajy vehivavy sy sokajy lehilahy amin’ny fifaninanana Volley-ball “ 26e Coupe Des Clubs De La
YMCA MADAGASCAR Namoaka ny andiany faha-5 amin’ny fiofanana S2C
Notanterahina tao amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny famoahana ny andiany fahadimy “COHORT 5” ny amin'ny
Nivoaka ankehitriny ny fanapahan-kevitra avy amin’ny fivorian'ireo rafitra misahana ny fitsipika amin'ny fifaninanana Orange Pro-League Malagasy fa :
1- Naharesy ambony latabatra, mahazo isa 3 ny Fosa Juniors Fc, taorian´ny tsy faneken´ny Elgeco Plus hanohy ny lalao intsony tamin’ny andro faha-9 tany Mahajanga. 2- Mandoa sazy ara-bola 2 Tapitrisa Ariary ity ekipa ity. 3- Nahazo sazy miantona ihany koa ny Elgeco Plus, ka hesorina hiala ny fifaninanana, raha mbola mandika ny lalàna mifehy ny fifaninana. 4- Ny sazy manokana ho an´ny mpilalaon´ny ekipa roa tonta indray, dia napetraky ny CFEM eo am-pelatanan´ny Commission de disciplines eo anivon´ny FMF ny fanapahana. Efa nalefa nivantana any amin’ny SG ny FMF ity fanapahan-kevitra ity, hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny Orange Pro-League Malagasy.
Nilaza ho tsy mbola naharay an’izany didy izany kosa Atoa Andriamanampisoa Afred filoha mpanorina ny Elgco Plus amin’ny maha filohan’ny “Commission de competition” azy ao amin’ny FMF fa tamin’ny gazety kosa no nahitany azy. Nambarany ihany koa fa nahoana no tsy nahazo sazy ny Fosa Juniors Fc tamin’ny tranga nitovy tamin’ny fihaonany sy ny Cnaps Sport teny Vontovorona ? Aiza izay mba sazy homena ny mpitsara fositry ny fifanolanana tamin’iny lalao iny, hoy izy. Tsy ekena intsony amin’ny manaraka ny hoe ny filohan’ny ligy mpampiantrano ihany no ho « Commissaire au match » amin’ny lalao fa lasa manao « juge et parti » izy ary farany dia nambarany fa tokony hampitoviana lenta ireo ekipa mandray anjara amin’ny fihaonana Pro-League mba hampisondratana ity baolina kitra Malagasy ity.
Lalao tara tamin'ny andro faha roa eo amin'ny Fosa Juniors FC sy ny FCA Ilakaka izay hotontosaina any Mahajanga ny alarobia 22 janoary 2020 ho avy izao amin'ny 2ora sy sasany ao amin'ny kianja Rabemananjara no tohin’ity fifaninanana ity.